Jwxo-shiil: Qawaaniinta Aduunka Ayaad Meel Kaga Dhacdeen, Hadaadd BBC-da, Tihiin – Rasaasa News
Jul 25, 2010 ethiopia, Hadaadd BBC-da, Jwxo-shiil: Qawaaniinta Aduunka Ayaad Meel Kaga Dhacdeen, Ogaden, ONLF, Tihiin
Jwxo-shiil, oo afkiisa laga gartay kaliya, yaa idiin sheegay? Maxaad u waraysateen? Miyaadan Ogayn in aan gudoomiye ahay? Nabad galiyo ma doonayno! Hadalka ha igu soo cel celin su,aal toosa i waydii! Hadalkayga umbaa socon! wixiin aan kuu sheego fuli! Waxaan kuu sheego oo kaliya sheeg, ha sheegin wax kale! Iwm
Arimihii ONLF aafeeyey ayuu eeggana Jwxo-shiil, Ideecadaha caalamiga ah ku samaynayaa. Waan cadhaysnahay ayuu Jwxo-shiil, hadalkiisa ku soo xidhay. Somali baa tidhi Tuug maxaa ka cadheeyey! Cakuye caqli aaway!
Wariye Cabdi Nuur Sheekh BBC-da, ayaa tan iyo intii uu waraysiyada ka qaaday Cabdi-nuur Maxamed Soyaan iyo Maxamed Faarax Colow, oo ka tirsan golaha dhexe ee ONLF, eeggana booqasho ku maraya gabalada dhulka Somalida Ogadeeniya.
Wariye Cabdi-nuur Sheekh, ayaa wuxuu jeclaaday bal in uu war ka helo ruux ka mid ah kooxda Jwxo-shiil, waxaana ugu horaynba uu la xidhiidhay Cabdiraxman Maadeey [Abtidoon], oo xoghayaha arimaha dibad ee kooxda, wuuna diiday in waraysi laga qaado, waxaa kale oo uu wariyuhu la xidhiidhay Cabdiqaadir Cadaani [Ina-dhuubo] iyo waliba Maxamed Ismaaciil [qaaxo], oo kala ah ku xigeenada 1aad iyo 2aad ee Jwxo-shiil, labadubana way diideen in ay waraysi bixiyaan.
Ugu dambayn wariyaha ayaa waxaa uu ogaaday in raga la shaqeeya Jwxo-shiil, ay cadhaysan yihiin oo ayna raali ka ahayn xukun jacaylka Jwxo-shiil, iyo waliba waxyeelada uu gaadhsiiyey dadweynaha Somalida Ogadeeniya. Waxayna u sheegeen wariyaha in ayna haynin wax ay sheegaan, waa meeshaas meesha uu Cabdi-nuur ka leeyhay dadkii kula shaqaynayey kuligood “biyey cantuugsan yihiin” oo macanheedu yahay [ma hadli karaan].
Wariye Cabdi-nuur, ayaa jeclaystay bal in uu hubsado wax ka jira arimaha lagu sheegayo Jwxo-shiil, wuxuuna Ogaaday ama uu tusay ummada Somaliyeed oo dhan wax uu yahay Jwxo-shiil.
Wariyaha ayaa siiyey wakhti ku filan, oo aan hubo in uusan jiri ruux waraysi laga qaado oo mudadaas la siiyey.
Waraysiga intii uu Jwxo-shiil, jawaabo ka bixin lahaa, wuxuu ku mashquulay maxaa loo waraystay Dr. Sooyaan waa maxbuuse? Waxaynu la wada soconaa in Dr. Sooyaan la siidaayey oo uu dib ugu xidhmay ururkiisii haatana uu ku jiro socdaal ay ku weheliyaan xubno ONLF oo dibadaha ka tagay horayna uga qayb galay wadahadaladii nabada ee Frankfurt.
Waxaan is leeyahay Jwxo-shiil, way ka “todhoqday” wuxuu aad uga cadhooday siidaynata Dr. Sooyaan, oo hore waraysi ugu sheegay in xadhigiisa uu Jwxo-shiil ka dambeeyey.
Nimaan adeerkii u waalan qosal kama dhargo, hadaad Qosal doonaysaan halkan ka dhagaysta Jwxo-shiil.